N'ime ụwa ebe ezigara email karịa mgbe ọ bụla (elu 53% site na 2014), ịghọta ụdị ozi ezigara, yana mgbe ezigara ozi ndị ahụ bara uru ma dị mkpa. Dị ka ọtụtụ n’ime unu, igbe ozi m enweghị njikwa. Mgbe m gụrụ banyere igbe efu, Enweghị m ike inyere ma nwee obere nchekwube banyere olu na n'ụzọ nke email na-azaghachi.
N'ezie, a sị na ọ bụghị SaneBox na MailButler (n'iji m Ntuziaka njikọ e), M na na na na otú m ga-eme m email. Sanebox na-arụ ọrụ dị egwu n'ịmụta nke n'ime ozi ịntanetị m chọrọ nlebara anya ozugbo na MailButler na-enye m ohere igbu oge nzaghachi, zoo ozi ịntanetị, ma bulie Apple Mail na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Kachasị ma nyiwe bụ na igbe m na-edozi n'etiti nchekwa. Anaghị m ejedebe na naanị Igbe mbata, nchekwa Junk, na ahịhịa ọzọ systems sistemụ ndị a na - ebugharị ozi na ọtụtụ folda ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ndị a bụ nnukwu ngwaọrụ maka m, ha ga-ebibi mbibi email nke ndị zitere na-achọ iru m. Omume email is na-agbanwe agbanwe, na ngwaọrụ ndị a bụ naanị otu ihe atụ nke otu.